‘Yesuus sobaa’ miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta’e eenyu? - BBC News Afaan Oromoo
‘Yesuus sobaa’ miidiyaa hawaasummaa irratti ijoo dubbii ta’e eenyu?
30 Adooleessa 2019
Madda suuraa, Fuula tiwiitera Synbad
Biyya Keeniyaa keessatti 'Yesuus sobaa' ilaalchisee yaadni gara gara kennamaa jira.
Namoonni Keeniyaatti tiwiitara fayyadaman viidiyoo nama akka Yesuus Kiristoos uffatee konkolaataa keessaa ol bahu agarsiisu waliif qoodaa jiru.
Tariimmoo maaltu akka ta'aa jiru hin beeknu. Garuu, namoonni baay'een dhuma torbee kanarraa akka tajaajila waldaa irratti argamee tajaajiluuf affeerame jedhu.
Namtichi reeffa guyyaa afur bule kaasuuf yaale hidhame
Paasteriin HIV'n fayyisa jedhe himatame
Manni sagadaa paastarii 'raajii' jedhame cufame
Fakkeenyaaf, namni Niwookee Nikweeree jedhamu fuula tiwiitara isaarratti akka barreessetti: "Ani akkan yaadutti Keeniyaanonni morkii Keeniyaafi Naayijeeriyaa gidduu jiru, nama ga'ee Yesuus Kiristoos taphatu affeeranii akka Dilbata darbe Keeniyaa keessatti waldaa tajaajiluun gochuudhaan mo'ataniiru."
Namni biraan Taariq Nasheed jedhamu ammoo, Keeniyaa keessatti paastaroonni tokko tokko 'Yesuus sobaa' waldaa isaanitti afeeruun akka barsiisu yeroo taasisan namoonni ammoo ifumatti isaaf galata dhiyeessu.
Maxxansa Twitter irra dabri, 1
I think Kenyans have won the #KenyavsNigeria battle, by inviting the man that acted the role of Jesus Christ, to officiate a sermon in Kenya last Sunday.
Uka agwugo pic.twitter.com/lYTY4VdSNu
— Nwoke Nkwerre (@alvanchinaka) July 29, 2019
Xumura maxxansa Twitter, 1
Namni 'Yesuus sobaa' kana duuba jiru eenyu?
Suurriifi viidiyoon namicha akka Yesuus Kiristoositti uffatee kun miidiyaa hawwaasummaan guutummaa Afirkaarra nanna'aa jira.
Garuu namichi kun eenyudha, maalimmoo hojjechaa jiraa?
Ergaan tiwiiteraa si'a 8,000 waliif qoodame tokko nama siyaasaa mormituu Afrikaa Kibbaa Juuliyees Maleemaa dabalatee irra deebiyuun qoodameera.
Ergaan isaa akkas jedha: "Paastariin Afrikaa Kibbaarraa Yesuus Kiristoosiin akka waldaasaatti dhufee barsiisuuf Waaqarraa afeere," jedha.
Garuu suuronni sun Keeniyaarraati. Sagantaa torban darbe keessa magaalaa Kaasaraanii kan magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobiirraa 25km karaa Kibba-lixaa fagaattutti qophaa'erratti kaafame.
Maxxansa Twitter irra dabri, 2
In Kenya, some pastors invited a fake “Jesus” to come preach, and the people there are literally praising him.
And this is the very reason why FBA have to prioritize our own issues domestically, because too many of these other folks are too far gone #smh pic.twitter.com/oENBtZOKo4
Xumura maxxansa Twitter, 2
Namichi lallabaa/barsiisaa US irraa dhufedha. Maqaan namicha kanaa Mikaa'el Joob jedhama.
Diraamaafi fiilmii keessattis akka taatoottis hojjechuun beekama. Sagantaa Keeniyaatti qophaa'e kanarrattis qophii waldaaleen amantaa qopheessanirratti akka keessummaa haasaa taasisu ta'ee affeerame.
Namichi kun Orlaandoo Filooriidaa keessa jiraata. Bakka jiraatu sanattis akka Yesuusitti paarkii 'The Holy Land Experience' jedhamu keessatti taphata. Bakki kun ammoo akka godambaa kitaaba qulqulluu jiraataatti of ilaala.
Viidiyoo inni dhuma torbee kana fuula feesbuukii isaarra kaawwate kanarraa suuqiiwwan qonnafi meeshaalee manaa Keeniyaan duubarraan ni mul'ata.
Viidiyoofi suuruma kanadha egaa kan Afrikaa Kibbaa keessatti ta'e jedhame kun.
Ergaan tiwiiteraa walumaa galaan suuraawwaniifi viidiyoowwan kanneen irratti paasteroonni Afrikaa waan raajii hojjetan jechuun akka malee qoosaa jiru.
Ergaan tokko akka biloogota tokko tokkorratti gadi dhiifamerratti "Paasteriin Keeniyaa tokko akka ofiin jedhutti Yesuus Kiristoos osoo daandii Keeniyaarra deemaa jiruu argeer".
Suurri tiwiiterarra jiru garuu kan Obbo Joob yeroo waldaa Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa (Pefa) magaalaa Kitengelaatti lallabaa/barsiisaa jirudha.
Viidiyoo lallaba isaa Keeniyaa keessatti lallabaan US kun wantota dinqisiisoo ta'a gochuufi fayyisuudhaaf waadaa galeera. Kana jechuusaatiifis miidiyaalee hawwaasummaa irratti hedduu qeeqameera.
Namichi kun kan gara Afrikaa dhufe yeroo jalqabaaf miti. Baruma kana gara jalqabaa Toogoo deemee ture. Achitti garuu suura maxxanserraa akka argametti akka kanaa bifa diramaatiin uffatee hin turre.
Zimbaabuwee: Namtichi raajii ofiin jedhu qoricha HIV fayyisa jedhe gurguruun himatame
5 Guraandhala 2019
Bootiswaanaan mana sagadaa paastar Bushirii 'raajii' jedhame cufte
11 Amajjii 2018
Namichi osoo cuuphamaa jiruu bishaan nyaate
Walaayittaatti mormii ka'een yoo xiqqaate namootni 10 ajjeefaman
11 Hagayya 2020
ABOn lamatti qoodamaa jiraa?
Vilaadimiir Puutin talaallii Covid-19 kennamuuf mirkaneeffame qabna jedhan
Waa'ee dhoohinsa Beerut hanga ammaatti maal beekna?
6 Hagayya 2020
4 Hagayya 2020
Caffeen naannoo Tigraay filannoo ilaalchisee heera naannichaa fooyyesse
Ameerikaatti dorgommii filannoo duraatiin Tiraamp moo Baayidantu dursaa jira?
7 Hagayya 2020
Karoorrri sharafa Birriifi Dolaara gidduu jiru bilisa gochuu maaliif barbaachise?
3 Hagayya 2020
Naannoon Tigray xalayaa akeekkachiisaa Mana Maree Federeeshiniitiif deebii kenne
Obbo Lammaa dabalatee aanga'oonni sadii koree giddu-galeessaa Badhaadhinaarraa dhorkaman
Tiraamp sababa dhukaasa naannoo Waayit Hawusitti uumameef ibsa adda kutan
Jawaar fi kaan abbaan seeraa dhimma isaanii ilaalu dhaddacharraa akka ka'u gaafatan
Bineensi dubartii fuunfate kolaafamuun dheekamsa kaase
Namtichi booyyee meeshaa jalaa hatterraa buufachuuf qullaa ummata dura fiige